Baaskiil Mountain, Baaskiil Mtb, Baaskiil Caruur ah - Beimudou
Qeyb muhiim u ah baaskiil kasta, qalabka gacanta lagu qaato.
RIMS & CAGAAR
Xor ayaad u tahay inaad sahamiso taayirro kala duwan, qarkiisa & taayirada baaskiilkaaga dukaankeenna.
Dukaankeenu wuxuu diyaar u yahay inuu ku siiyo xulashada koorsooyinka ugu fiican ee dhammaan qaababka iyo noocyada baaskiilkaaga.
Ma u baahan tahay qaab lagu kalsoonaan karo oo waara baaskiilkaaga? Maamulayaashayada dukaanku waxay diyaar u yihiin inay ku caawiyaan.
Caruurta Balance Balance 14 inch Magnesium Alloy Frame ...
Steel carbon sare tayo sare leh 20 inch laabma ...
26 inji baaskiilka xawaaraha isku laaban ee ragga
Juun 18, 2021
Baaskiil buur wuxuu ka soo bilaabmay San Francisco, USA sanadkii 1977.Wuxuu ku habboon yahay noocyo kala duwan oo xaalado waddo adag ah Jidh qaldan, xakameyn dabacsan, taayiro ballaadhan, oo si fudud loo mari karo, oo badanaa leh gear ah oo loo wareejin karo xoog-badbaadin ama qalab degdeg ah , iyo nidaam nuugista shoogga si loo yareeyo qaska.
Shiinaha · Waqooyiga (Pingxiang) Baaskiillada Caalamiga ah iyo Carruurta Carruurta lagu ciyaaro ayaa si guul leh loo qabtay muddo 11 sano ah. Dhammaan bandhigyadii hore waxay soo jiiteen ganacsato badan, hoggaamiyeyaasha warshadaha iyo hoggaamiyeyaasha warshadaha. Bandhiggu waa mid aan horay loo arag, sidoo kale waa bandhigii ugu weynaa ee xirfadeed ee Waqooyiga Shiinaha. ...
Bandhigga Baaskiilka Shiinaha ee Shanghai ayaa la qabtaa sanadkiiba mar, waa mid ka mid ah bandhigyada ugu waaweyn uguna saameynta badan adduunka, Bandhiggii ugu dambeeyay ee Shanghai ayaa soo jiitay in ka badan 6,500 waab, in ka badan 2,000 oo carwo, tirada ganacsatada ayaa gaadhay 200,000 oo qof, oo lagu qabtay Shanghai N ...
Waxaa la aasaasay 1985, Ururka Baaskiilka Shiinaha (CBA) waa urur qaran oo ka socda warshadaha Baaskiilka ee Shiinaha, waa urur bulsheed oo aan faa'iido doon ahayn iyo qof sharci ah. Waxaa si iskood ah u sameeyay baaskiil, baaskiil koronto iyo qaybaha wax soo saarka qaybaha, iyo sidoo kale wax soo saarka la xiriira iyo ganacsiga e ...
Balance Baaskiil, Baaskiil Balance Balance, Baaskiil Balance Caruurta, 20 Baaskiil Inch / Baaskiil, Baaskiiladaha, Balance Baaskiil,